Ady & Fifandirana · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Janoary, 2011
Libanona: Mpikambana iraikambinifolo tao amin'ny Kabinetra nametra-pialàna, governemanta voaongana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 13 Janoary 2011
Vaovao lehibe maro avy amin'ny tontolo Arabo no azo tamin'ity hariva ity satria toa hoe hirodana ny governemanta Libane, nanaraka ny fametraham-pialàn'ny mpikambana 11 tao amin'ny kabinetra. Ireo mpikambana ao amin'ny kabinetra, ny mpikambana rehetra na ireo mpiara-dia amin'ny Hezbollah, dia nametra-pialàna noho ny tohan-kevitra avy amina tatitra iray nataon'ny Firenena Mikambana mikasika ny famonoana an'ilay praiminisitra Libane teo aloha, Rafiq Hariri
Azia Atsinanana 12 Janoary 2011
Nisy fanafihana amin'ny aterineto nipoaka teo amin'i Korea Atsimo sy Korea Avaratra. Natomboky ny mpampiasa aterineto Koreana Tatsimo iray namoaka tononkalo manevateva mikasika ny fianakavian'i Kim tao amin'ny vohikala ofisialin'ny Korea Avaratra Uriminzokkiri, ary dia novalian'i Korea Avaratra tamina fanafihana DDOS. Androany, dia namely ny kaonty twitter ofisialin'i Korea Avaratra ireo piraty.
Meksika: Mandefa tweets mikasika ny Herisetra amin'ny #RedMexico
Amerika Latina 11 Janoary 2011
Reraky ny herisetra mifandray amin'ny zava-mahadomelina, ireo Meksikana mpampiaza twitter dia mampiasa ny tenifototra #MexicoRojo ("Meksika Mena") mba hifanakalozana hevitra sy ho fanavaozam-baovao momba ny zava-mitranga tato ho ato ho an'ireo mpanaraka azy ireo.
Amerika Latina : tamberina ny taona 2010
Amerika Latina 10 Janoary 2011
Tamin'ny 2010 no nisy horohorontany goavana indrindra namely an'i Chili, filoham-pirenena nandray ny asany, ny filoha any Argentine teo aloha nodimandry tampoka, ny loka Nobel momba ny literatiora nomena ilay terantany avy any Peru Mario Vargas Llosa, ary ny Global Voices nanao ny fihaonana an-tampony tany Santiago, Chili. Andeha hiverenantsika ireny...
Palestina: Tatitry ny nanatri-maso momba ny baomba mandatsa-dranomaso tamin'ny fihetsiketsehana tany Bil'in
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Janoary 2011
Ny fahafatesana vehivavy Palestiniana iray tany Bil'in, voalaza ho noho ny fifohana baomba mandatsa-dranomaso tany amina fihetsiketsehana, dia niteraka fihetsiketsehana hafa indray androany - tamin'ity indray mitoraka ity voatatitra ary narahana akaiky tamin'ny fitoraham-blaogy kiritika Twitter.
Côte d'Ivoire : Sehona habibiana ao amin'ny fonja be gadra indrindra
Afrika Mainty 08 Janoary 2011
Misy video mampikorontana ny fiaraha-monina Ivoriana amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao. Ahitàna ny miaramila midaroka gadra - voalaza ho mpomba an'i Alassane Ouattara - ao amin'ny MACA, fonja any Abidjan. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny krizy ara-politia any Cote d'Ivoire, am-polony ireo olona nosamborina tany Abidjan noho ny fironany ara-politika, ary nogadraina ao amin'ny MACA.